उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी : ‘नक्सामा चुच्चो थप्दैमा त्यो प्राप्त भइहाल्ने होइन’ | Ratopati
personशम्भु दंगाल exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २०, २०७७ chat_bubble_outline0
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नाममा एकीकरण घोषणा भएपनि आधिकारिकता पाइनसकेको राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले सोमबार संयुक्त रूपमा सङ्घीय संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ दर्ता गरेका छन् । सांसदहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले विधेयक संयुक्त रूपमा दर्ता गरेका हन् । दुई दलले संविधानका विभिन्न २३ वटा धारा संशोधनको माग गरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषयलाई संशोधन विधेयकमा समावेश गरेको बताएका छन् । सरकारले नेपालको नक्सा जारीपछि संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेको सन्दर्भमा दुई दलले किन विधेयक दर्ता गरे ? यसबारेमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता उपेन्द्र यादवसँग गरिएको सङ्क्षिप्त कुराकानीः
–मुख्यतः के हो भने हामीले उठाउँदै आएका कुराहरु निर्वाचनसम्बन्धी सवाल, राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी सवाल, न्यायपालिकासम्बन्धी सवालहरु, नागरिकतासम्बन्धी सवालहरु लगायतका विषयहरु संविधानमा हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका हौँ । ती मुद्दाहरुलाई समेटेर विधेयक दर्ता गरिएको छ ।
–यहाँबाट अगाडि बढाउने काम हामीले दर्ता गरेका हौँ । हामीले हाम्रा सरोकारहरु देश र जनताको लागि राख्यौँ । अब यसलाई अगाडि बढाउने सभामुखले हो, सरकारमा रहेका दलहरुले हो । अरू पार्टीहरुले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइदिएर अगाडि बढाए भने मुलुकले निकास पाउने, राष्ट्रिय एकता दह्रो हुने छ । सङ्घीय गणतन्त्र बलियो हुने र मुलुक राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न अघि बढ्ने हो । त्यो बढाउन चाहने वा नचाहने सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षको चाहना र दायित्व पनि हो ।
सभामुखले अघि बढाउनुभएन भने तपाईंहरु के गर्नु हुन्छ ?
–सभामुखले अघि बढाउनु भएन भने संविधान संशोधनमार्फत मुलुकलाई गति दिन, मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरुलाई हल गर्न नचाहेको ठहर्छ ।
–पटक पटक हामीसँग हस्ताक्षर भएका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्, प्रचण्डजी, केपीजी, झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेका डकुमेन्ट, संविधान संशोधन गरेर समस्या हल गर्छु भनेर गरेका प्रतिबद्धता विगतमा उहाँहरुले दिनुभएको हो नि । त्यो त यहाँहरुलाई पनि थाहा छ । पटक पटक सहमति र समझदारीहरु भएका छन् ।
–हामीले पहिले पनि भनेकै हौँ, सँगै लैजाऔँ, एउटै प्याकेजमा हालेर सबै समस्या समाधान गरौँ भनेको हो । अझ म सरकारमा भएको बेला कानुन मन्त्रीको हैसियतले प्रस्ताव नै लगेको हो नि । हामीले त अगाडिदेखि नै गर्दै आएका हौँ । बीचमा यो लिपुलेकवाला आयो । तर यो संविधान संशोधन हुँदैमा नक्सामा चुच्चो थप्दैमा त्यो प्राप्त भइहाल्ने त हैन नि । त्यो प्राप्त गर्नका लागि दुईवटा बाटाहरु छन् । पहिलो बाटो भनेको आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने हो ।
–अब हामीप्रति सरकारको धारणा के हो ? पहिला त्यो पनि स्पष्ट हुनुप¥यो । हामी राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ । राष्ट्रिय एकता दह्रो भएर एकसाथ उभिनुपर्छ । हामीले भनेका छौँ, सरकारले जुन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेको छ, त्यसलाई बहुमतले हैन कि सर्वसम्मतले पारित गर्ने र सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकठाउँ राख्ने वातावरण बनाउने काम त सरकारको हो नि ।
सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधनको पक्षमा तपार्इंहरु मतदान गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ?
–त्यस विषयमा हामीले दर्ता गरेको विधेयकमा सरकारको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसपछि पार्टीले बसेर निर्णय गर्छ । त्यसबारे अहिले हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ ।
यसको मतलब यदि सरकारले तपाईंहरुको विधेयकलाई स्वीकार गरेन भने तपाईंहरु पक्षमा मतदान गर्नुहुन्न ?
–त्यसपछि पार्टीले निर्णय गर्छ, अहिले निर्णय नगरिसकेको कुरा, भविष्यमा के निर्णय हुन्छ भनेर अगाडि नै निर्णय गर्नु त त्यति राम्रो हैन नि ।